Sida loo rakibo Soo-kabashada LG G2 talaabo talaabo ah | Androidsis
Francisco Ruiz | | Soo kabashada Android, LG, Tababarada
Casharkaan Waxaan ku tusayaa sida loo rakibo Soo kabashada wax laga beddelay gudaha LG G2 moodooyinka D-802 caalami ah y D-800 ee shirkadda AT & T.
Geedi socodka waa mid aad u fudud oo waa ku filan in la soo bixi faylka u dhiganta nooca gaarka ah ee LG G2 oo dooro nooca Dib u habeynta wax laga beddelay si loo rakibo. Waxaan kala dooran karnaa Dib u soo noqoshada ClockworkMod iyo TWRP.
1 Maxay u iftiiminayaan soo kabashada wax laga beddelay?
3 Ku rakibidda ClockworkMod Soo Celinta LG2
4 Ku rakibidda TWRP Recovery
5 Sideen ku heli karaa Soo-kabashada cusub ee wax laga beddelay?
Maxay u iftiiminayaan soo kabashada wax laga beddelay?
Waa wax xiiso leh in la rakibo a Soo kabashada wax laga beddelay, wax kasta oo ay noqon karto, maxaa yeelay iyada ayaa laga helayaa xulashooyin cusub oo aanan ka heli karin Soo-celinta taxanaha ah ee terminaalkeenna Android.
Waxaan leenahay xulashooyin sida xiisaha leh u sameeya a Nandroid backup o keydinta nidaamkeenna oo dhan si aan uga soo ceshanno, haddii loo baahdo, kana soo baxa terminaalka laftiisa oo aan loo baahnayn kombuyuutar shaqsiyeed.
Mid kale oo ka mid ah howlaha ay na siinayaan Dib u soo kabashada wax laga beddelay, waa suurtagalnimada rakibidda ama shumac roms la kariyey si aan u cusbooneysiino terminaalkeena dibada LG iyo shirkadaha lahaanshaheeda.
Haddii aad xiisaynayso rakibidda Roms la kariyey gudaha LG G2 waxaan seegnay qaybta ah Roma en Androidsis kaas oo aan ku soo bandhigi doonno shaqooyinka ugu fiican ee aan ka helno shirarka horumarinta ee kala duwan Android.
Kahor intaadan sii wadin casharkaan, waa inaan kaaga digayaa markaad wax ka badaleyso soo-kabashada noo LG G2, si toos ah ayaan u khasaaraynaa ansaxnimada dammaanadda rasmiga ah ee alaabta aad na siiso LG muddo laba sano ah.
Shuruudda ugu horraysa ee lagama maarmaanka ahi waa in la helo mid ka mid ah labada nooc ee LG G2 la jaan qaada casharradan, sidaan daqiiqad kahor kuugu sheegay, tani waxay khuseysaa oo keliya kuwa D-802 caalami ah iyo isaga D-800 ee shirkadda AT & T.
Si loo rakibo Dib u soo noqoshada ClockworkMod waxaan sidoo kale u baahan doonaa inaan horay u helno terminal-ka Xididaysan, haddii aadan aqoon sida loo gaaro tan, waxaan kugu casuumayaa waxaad ku dhex socotaa casharkaan halka aan si faahfaahsan kuugu sharaxayo.
Waxaas oo dhan waxaa sii dheer waa inaan wadnaa wadayaasha koontoroolkeenna wadayaal si sax ah loogu rakibo kombuyuutarkeena Windows, batteriga LG G2 waa in lagugu soo oogaa 100 × 100 si looga fogaado dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo sidoo kale Qalabaynta USB karti u leh xulashooyinka horumarinta.
Ku rakibidda ClockworkMod Soo Celinta LG2
Tani waa mid ka mid ah labada ikhtiyaar ee aan ku rakibeyno Beddelaad wax ka beddel ah oo ku saabsan annaga LG G2. Si loo rakibo CWM Recovery waa inaan heysanaa LG G2 rujin oo raac tilmaamahan:
Marka hore waxaan doorannaa ZIP inaad ku soo dejiso sida ku cad moodelkeenna LG G2:
Faylasha loo baahan yahay ee loogu talagalay Caalamiga ah D-802
Faylasha Loogu Baahan Yahay AT&T D-800
Marka feylka 'ZIP' la soo dejiyo iyadoo loo eegayo qaabkeenna, waxaan ka fureynaa meel kasta oo kombuyuutarkeena ah, waxaan ku xireynaa LG G2 USB-ga oo waxaan ku fulineynaa faylka flash_kabashada_windows.bat. Hadda waxa lagaa doonayo oo dhan waa inaad raacdaa tilmaamaha shaashadda.
Inta hawshu socoto waxay na siin doontaa kala doorbid Recovery caadi ah oo aan kula tacaali karno furayaasha mugga ama a Taabo soo kabashada.
Ku rakibidda TWRP Recovery
Si ka duwan Soo-celinta hore, si loo rakibo tan TWRP Soo Celinta uma baahnid inaan noqono isticmaale xidid.
Si loo rakibo, way ku filnaan doontaa iyada ku soo dejiso faylkan isku-dhafan ee ZIP, ka fur furka meel kasta oo ka mid ah Windows-keena, ku xir LG G2 kombiyuutarka adoo adeegsanaya USB-ga oo faylka ku orod soo kabashada .bat, ka dib waxaan raacnaa tilmaamaha shaashadda PC waana intaas.
Este Recovery waa dabeecad taabasho leh waxayna kuu ogolaaneysaa inaad feylal badan ku shubtid hal mar.
Sideen ku heli karaa Soo-kabashada cusub ee wax laga beddelay?
Labada xaaladoodba, si aan u helno Soo-kabashada cusub ee la rakibay, waa inaan sidaa yeelnaa innagoo ka bilaabeyna xiritaanka terminalka iyo tan tan ku xigta isku darka badhanka:
Badhanka hay Badhanka badhanka mugga oo laga jaray riix ilaa astaanta LG, ka dibna waxaan u sii daynaa iyaga daqiiqad ah si aan u riixno labada badhan isla waqtigaas. Haddii aan si fiican u qabannay, shaashad ayaa soo muuqan doonta si ay u sameyso a Warbixannada Hard al LG G2, shaashadan waa inaan ku riixnaa badhanka awood laba jeer oo isku xigta oo waxaan ku jiri doonaa shaashadda weyn ee Soo-kabashada cusub ee la rakibay.
Macluumaad dheeraad ah - Sida loo xidid LG G2 talaabo talaabo ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » Sida loo rakibo Soo-kabashada wax laga badalay LG G2
tani waxay ka saareysaa astaamaha shirkadda AT&T ?????
Maya, tan waxaad kuheli doontaa marinka soo kabashada si aad awood ugu yeelatid roomaano la kariyey, haddii aad rabto inaad ka heshid qalab nadiif ah qashinka wadaha, way kugu filnaan doontaa inaad kala soo baxdo qalab rasmi ah oo aad ku iftiimiso barnaamijka LG.
Suurtagal ma tahay in lagu laabto Hantida Soo-kabashada ka dib markii aad rakibtay labadan midkood?
Ku jawaab Luvalab
Haddii uu biligleynayo Firmware asal ah
Mahadsanid !! Blog aad ufiican oo loogu talagalay G2 iyo dadka isticmaala android guud ahaan!
Waa salaaman tahay, waxaan ahay gonzalo waxaanan soo iibsanayaa LG G2 oo leh nooca D805, waa mid loogu talagalay dhammaan Latin Amerika. Ma ogaan kartaa haddii ay jiraan wax nidaam ah oo loogu talagalay
Soo kabashada wax laga badalay ... waad ku mahadsantahay kaalmadaada
Nabade Francisco, maheysaa faylasha D803?
Waad salaaman tahay saaxiib waxaan ku rakibey meu g2 d802 ama cwm waxaan hayaa sida loo rakibo ama loo twrp? Barashada timaha Parabens.
Waad salaaman tihiin markaan isku dayo inaan rakibo TWRP waan fashilmay waxbana kamay muuqan qaabka soo kabashada fikrad kasta oo jirta maxaa qaldan? Waxaan hayaa qaabka ATT-ga
Ma leedahay darawallo rakibay? Miyaad karti u sixi kartaa USB? Miyaad ku xiran tahay kombuyuutarka adoo kaliya lacag bixinaya?
Waad salaaman tihiin, sidee tahay Anigu waxaan ahay isticmaale cusub waxaanan fahmay nidaamka oo dhan ... laakiin shaki baa iga jira: maxay taasi uga dhigan tahay USB awood, sidee baan ku ogaadaa taas, sideen ku ogaadaa inaan haysto dhammaan wadayaasha gawaarida kumbuyuutarka iyo ugu dambeyn, soo kabashada noocee ah ayaad ku talineysaa, xidid ama aan xidid ahayn? Mahadsanid iyo salaan ka timid CD-ga Mexico!
Haddii aad haysato PC Suitte oo aad waligaa ku xidho mobilada kombiyuutarka, waad ku rakibi doontaa iyaga, sida khaladka usb-ka, haddii aadan awoodin in ay soo bandhigaan menuyaasha, geli macluumaadka barnaamijka oo guji toddoba jeer oo isku xigta nambarka isku-darka iyo marka aad ku noqonayso menu-ka Settings qayb cusub oo la yiraahdo ikhtiyaarrada horumarsan ayaa soo muuqan doona.
Dhanka Soo-kabashada, labaduba way fiican yihiin in kasta oo aan marwalba kula taliyo Root-ka xitaa haddii aad rakibayso TWRP.
asxaabta fiidiyowga si loo xidido G2 4.4.2
Ku jawaab diego mendoza
Waa hagaag, casharku waa mid aad u wanaagsan, laakiin su'aal ayaa soo baxaysa, waxay faa'iido u leedahay nooca KitKat 4.4.2 ama waa inaan soo dejiyaa Jelly Bean 4.3.2 haddii ay sidaas tahay, waxaan kuugu mahadcelinayaa casharka hoos u dhaca, mahadsanid, waxaana kugula talinayaa ardedev v2 rom.
Jawaab Alejandro Zea Caicedo
Francisco a Nicmo, my lg g2 d805 ayaa joogsaday, markaan riixo badhamada astaanta ayaa soo muuqaneysa wayna tagaysaa, laakiin ma daarto taleefankayga gacanta, fadlan caawi
Waxaan hayaa LG G2 D802, oo lagu sameeyay KOREA, oo aanan isticmaali karin maxaa yeelay ma soo saarto calaamad, waxaan ka imid Venezuela oo aad iga caawin karto, waa inaan bedelaa si aan u isticmaali karo, sida laga soo xigtay LG Venezuela kan ay haystaan ​​805.
Francisco wuu fiicnaan lahaa inuu dib u soo rogo xiriiriyeyaasha maaddaama meg la tirtiray.
Waad ku mahadsantahay casharka.
isku xir hoos)
Haa, aan shaqeynayn laakiin xiriiriyeyaal aad muhiim u ah!
Ku jawaab Pepa